Satana Devoly - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > Ny tontolon'ny fanahy > Satana ny devoly
Misy fironana ratsy indroa ao amin'ny tontolo andrefana ankehitriny momba an'i Satana, ny devoly voalaza ao amin'ny Testamenta Vaovao ho mpifanandrina sy fahavalon'Andriamanitra tsy hay lazaina. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala ny devoly na manamaivana ny anjara asany amin'ny famoronana korontana sy fijaliana ary faharatsiana. Ho an'ny olona maro, ny fiheverana demonia tena izy dia sisa tavela amin'ny finoanoam-poana taloha, na amin'ny sary tsara indrindra izay mampiseho ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao.
Etsy ankilany kosa, ny Kristiana dia nino ny finoanoam-poana momba ny devoly fantatra amin'ny hoe "ady ara-panahy". Izy ireo dia manome fankatoavana be loatra ny devoly ary "miady aminy" amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny torohevitra hitantsika ao amin'ny Soratra Masina. Hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity izay fanazavana omen'ny Baiboly antsika momba an'i Satana. Miaraka amin'io fahatakarana io dia afaka misoroka ny fandrika amin'ireo fihenan-tànana voalaza etsy ambony isika.
Fanamarihana avy amin'ny Testamenta Taloha
Isaia 14,3—23 sy Ezekiela 28,1-9 dia heverina ho fanoritsoritana ny niavian'ny devoly ho anjely nanota indraindray. Ny sasany amin'ireo antsipiriany dia azo jerena ho famantarana ny devoly. Ny teny manodidina amin’ireo andalana ireo anefa dia mampiseho fa ny ankamaroan’ny lahatsoratra dia mifandray amin’ny zava-poana sy ny fireharehan’ny mpanjaka olombelona — ny mpanjakan’i Babylona sy Tyro. Ny hevitra ao amin'ireo fizarana roa ireo dia ny hoe ny mpanjaka dia voafehin'ny devoly ary taratry ny fikasan-dratsiny sy ny fankahalany an'Andriamanitra. Ny firesahana momba an’i Satana, ilay mpitarika ara-panahy, dia ny fitenenana amin’ny fofon’aina iray ny amin’ireo olony olombelona, ​​dia ireo mpanjaka. Fomba iray ilazana fa ny devoly no mitondra izao tontolo izao.
Ao amin’ny bokin’i Joba, misy firesahana momba ny anjely milaza fa teo izy ireo tamin’ny famoronana izao tontolo izao ary feno fahagagana sy fifaliana.8,7). Etsy andaniny, toa anjely koa i Satana ao amin’ny Joba 1-2, satria voalaza fa anisan’ny “zanak’Andriamanitra” izy. Izy anefa no fahavalon’Andriamanitra sy ny fahamarinany.
Misy firesahana momba ny “anjely lavo” ao amin’ny Baiboly (2. Petrus 2,4; Joda 6; Job 4,18), nefa tsy misy fototra momba ny fomba sy ny antony nahatonga an’i Satana ho fahavalon’Andriamanitra. Ny Soratra Masina dia tsy manome tsipiriany momba ny fiainan’ny anjely, na momba ny anjely “tsara”, na momba ny anjely lavo (antsoina koa hoe demonia). Ny Baiboly, indrindra fa ny Testamenta Vaovao, dia liana kokoa amin’ny fanehoana an’i Satana amintsika noho ny amin’ny olona iray izay mitady hanakantsakana ny fikasan’Andriamanitra. Antsoina hoe fahavalo lehibe indrindra amin’ny vahoakan’Andriamanitra izy, dia ny Fiangonan’i Jesoa Kristy.
Ao amin'ny Testamenta Taloha, Satana na ny devoly dia tsy voatonona amin'ny anarany. Na izany aza, ny faharesen-dahatra fa ny hery kosmika dia miady amin'Andriamanitra dia hita mazava amin'ny antony manosika azy ireo. Ny antony roa ao amin'ny Testamenta Taloha izay maneho an'i Satana na ny devoly dia rano sy biby goavam-be. Izy ireo dia sary mampiseho ny faharatsian’i Satana izay mihazona ny tany eo ambanin’ny ody ataony sy miady amin’Andriamanitra. Ao amin’ny Joba 26,12-13 isika dia mahita an’i Joba nanambara fa Andriamanitra dia “nampihetsi-po ny ranomasina” ary “namakivaky an’i Rahaba”. I Rahaba dia antsoina hoe “menarana mihelina” (and. 13).
Ao amin’ireo toerana vitsivitsy izay ilazana an’i Satana ho toy ny olona manokana ao amin’ny Testamenta Taloha, i Satana dia aseho ho mpiampanga izay mitady hamafy korontana sy hitory (Zakaria). 3,1-2), mandrisika ny olona hanota amin’Andriamanitra izy (1Ta 21,1) ary mampiasa ny olona sy ny singa mba hahatonga fanaintainana sy fijaliana lehibe (Joba 1,6- enina ambin'ny folo; 2,1- iray).
Hitantsika ao amin’ny bokin’i Joba fa i Satana dia mihaona amin’ny anjely hafa mba hanolotra ny tenany amin’Andriamanitra toy ny hoe nantsoina ho amin’ny filan-kevitra any an-danitra. Misy andinin-teny hafa ao amin'ny Baiboly momba ny fanangonana anjely any an-danitra izay misy fiantraikany amin'ny raharahan'olombelona. Amin'ny iray amin'ireo, ny matoatoa mandainga dia mamitaka mpanjaka handeha hiady (1. Mpanjaka 22,19- iray).
Andriamanitra dia aseho ho toy ny olona iray izay “natorotoro ny lohan’i leviatana ka nanome azy hohanin’ny bibidia.” ( Salamo 7 ).4,14). Iza moa i Leviatan? Izy no “bibilava” - ilay “menarana mihelina” sy “menarana mihodinkodina” izay hofaizin’i Jehovah “amin’ny andro” handringanan’Andriamanitra ny ratsy rehetra tsy ho etỳ ambonin’ny tany ka hampiorenany ny fanjakany (Isaia 2.7,1).
Ny motif ny Leviatan ho bibilava dia niverina tany amin'ny saha Edena. Eto ny menarana - "izay fetsy noho ny biby rehetra any an-tsaha" - dia mamitaka ny olona hanota amin'Andriamanitra, izay niafara tamin'ny fahalavoana (1. Mosesy 3,1-7). Izany dia mitarika ho amin’ny faminaniana iray hafa momba ny ady ho avy eo amin’ny tenany sy ny menarana, izay hita fa nandresy tamin’ny ady mafy (fanindronan’ny ombelahin-tongotr’Andriamanitra) ilay menarana, ka resy tamin’ny ady (torotoro ny lohany). Ao amin’io faminaniana io dia hoy Andriamanitra tamin’ny menarana: “Hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, dia ny taranakao sy ny taranany; hanorotoro ny lohanao izy, ary hanindrona ny ombelahin-tongony ianao »(1. Mosesy 3,15).
Fanamarihana ao amin'ny Testamenta Vaovao
Ny dikan’io teny io dia azo takarina amin’ny fahazavan’ny Fahatongavan’ny Zanak’Andriamanitra ho nofo amin’ny maha-Jesosy avy any Nazareta (Jaona. 1,1. 14). Hitantsika ao amin’ny Filazantsara fa niezaka nandrava an’i Jesosy tamin’ny fomba hafa i Satana nanomboka tamin’ny andro nahaterahany ka hatramin’ny nahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana. Na dia nahomby aza i Satana tamin’ny namonoana an’i Jesosy tamin’ny alalan’ireo solony olombelona, ​​dia resy tamin’ny ady ny devoly noho ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin’ny maty.
Taorian’ny niakaran’i Jesosy tany an-danitra, dia nitohy ny ady an-danitra teo amin’ny ampakarin’i Kristy — ny olon’Andriamanitra — sy ny devoly sy ny mpanompony. Kanefa ny fikasan’Andriamanitra dia manjaka ary mitohy. Amin’ny farany dia hiverina i Jesoa ka handrava ny fanoherana ara-panahy aminy (1. Korintiana 15,24- iray).
Ny bokin'ny Apokalipsy manokana dia maneho ity tolona eo amin'ny herin'ny ratsy eto amin'izao tontolo izao, izay tarihin'i Satana, sy ny herin'ny tsara ao am-piangonana izay tarihan'Andriamanitra.An'ity boky ity feno sarin-javatra, izay ao anatin'ny karazana literatiora Apokalipsy, tanàna roa lehibe kokoa noho ny fiainana, i Babylona sy i Jerosalema lehibe sady vaovao, dia maneho vondrona roa eto an-tany izay miady.
Rehefa tapitra ny ady, dia hofatorana rojo vy ao amin’ny lavaka mangitsokitsoka ny devoly na Satana ka hosakanana tsy “hamitaka izao tontolo izao” toy ny nataony teo aloha ( Romana 1 Kor.2,9).
Amin’ny farany dia hitantsika fa ny fanjakan’Andriamanitra dia mandresy amin’ny ratsy rehetra. Nasehon’ny sary an-tsary ny tanàna iray lavorary — ny tanàna masina, Jerosaleman’Andriamanitra — izay itoeran’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry miaraka amin’ny olony ao amin’ny fiadanana sy fifaliana mandrakizay, izay tanteraka noho ny fifalian’izy ireo (Apokalypsy 2 Kor.1,15-27). Horinganina i Satana sy ny herin’ny ratsy rehetra ( Apokalypsy 20,10 ).
Jesosy sy Satana
Ao amin'ny Testamenta Vaovao, fantatra mazava fa fahavalon'Andriamanitra sy ny olombelona i Satana. Amin'ny fomba iray na hafa dia ny devoly no tompon'andraikitra amin'ny fijaliana sy ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Tao amin'ny asa fanasitranana nataony, i Jesosy dia niresaka ireo anjely lavo sy i Satana ho antony mahatonga ny aretina sy ny rofy koa. Mazava ho azy fa tokony hitandrina isika mba tsy hiantso ny olana rehetra na ny aretina avy amin'i Satana. Na eo aza izany dia manan-danja ny manamarika fa ny Testamenta Vaovao dia tsy matahotra ny hanome tsiny ny devoly sy ny namany ratsy noho ny loza maro, anisan'izany ny aretina. Ratsy ny aretina fa tsy zavatra notendren'Andriamanitra.
Jesosy dia niantso an’i Satana sy ireo fanahy lavo ho “ny devoly sy ny anjeliny” izay nanomana ny “afo mandrakizay” ho azy (Matio 2.5,41). Hitantsika ao amin’ny Filazantsara fa ny demonia no mahatonga ny aretina sy aretina isan-karazany. Amin'ny toe-javatra sasany, ny demonia dia nibodo ny saina sy/na ny vatan'ny olona, ​​ka niteraka fahalemena toy ny fikorontan-tsaina, moana, fahajambana, paralysis amin'ny ampahany, ary karazana adala isan-karazany.
Niresaka momba ny vehivavy iray izay nihaona tamin’i Jesoa tao amin’ny synagoga i Lioka, izay “nanam-panahy nandritra ny valo ambin’ny folo taona ka naharary azy” (Lioka 1.3,11). Nafahan’i Jesosy tamin’ny aretiny izy ireo ary notsikeraina noho ny fanasitranana tamin’ny andro Sabata. Jesosy namaly hoe: Tsy tokony hovahana amin'ity gadra ity amin'ny Sabata va ity zanakavavin'i Abrahama, izay efa nafatotr'i Satana valo ambin'ny folo taona ity? (V. 16).
Amin'ny toe-javatra hafa, dia naharihariny ny demonia ho antony mahatonga ny aretina, toy ny tamin'ny ankizilahy iray izay nifanintontsintona mafy ary tsy nampoizin'ny volana hatramin'ny fahazazany.7,14-19; marika 9,14-29; Lioka 9,37-45). Azon’i Jesosy natao fotsiny ny nandidy an’ireo demonia ireo mba hiala amin’ireo osa, dia nankatò izy ireo. Nasehon’i Jesosy tamin’izany fa manana fahefana feno amin’ny tontolon’i Satana sy ny demonia izy. Nomen’i Jesosy fahefana mitovy amin’ny demonia ny mpianany (Mat 10,1).
Nilaza ny apostoly Petera fa nanafaka ny olona tamin’ny aretina sy ny aretina ny fanompoan’i Jesosy manasitrana, satria i Satana sy ny fanahiny no nahatonga azy mivantana na ankolaka. “Fantatrareo izay nitranga nanerana an’i Jodia... ny amin’ny nanosoran’Andriamanitra an’i Jesosy avy any Nazareta tamin’ny fanahy masina sy ny hery; nandehandeha nanao soa izy ka nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly, fa Andriamanitra nomba Azy » (Asan’ny Apostoly 10,37-38). Io fiheverana ny asa fanasitranana nataon’i Jesosy io dia maneho ny finoana fa i Satana dia fahavalon’Andriamanitra sy ny zavaboariny, indrindra fa ny olombelona.
Mametraka ny helony lehibe indrindra amin'ny fijaliana sy ny ota amin'ny devoly ary manondro azy ho toy izany izy
«Mpanota voalohany». Ny devoly manota hatramin’ny voalohany »(1. Johannes 3,8). Nantsoin’i Jesosy hoe “andrianan’ny demonia” i Satana, ilay mpanapaka ny anjely lavo (Matio 2.5,41). Nopotehin’i Jesosy ny fitaoman’ny devoly teo amin’izao tontolo izao tamin’ny alalan’ny asa fanavotana nataony. Satana no “lehilahy matanjaka” izay nidiran’i Jesosy tao an-tranony (Mar 3,27). “Namatotra” ny mahery i Jesosy ary “nizara ny babo” [mitondra ny fananany, dia ny fanjakany].
Izany no nahatonga an’i Jesosy ho nofo. Hoy i Jaona: “Ny Zanak’Andriamanitra dia niseho handrava ny asan’ny devoly.” (1. Johannes 3,8). Ny Taratasy ho an’ny Kolosiana dia miresaka momba an’io asa ravana io amin’ny teny eran-tany: “Nanesorany ny fahefana sy ny fahefana tamin’ny heriny ka nasehony ampahibemaso, ary nataony ho mpandresy ao amin’i Kristy izy.” ( Kolosiana. 2,15).
Ny Taratasy ho an’ny Hebreo dia manazava amin’ny antsipiriany bebe kokoa ny fomba nanatanterahan’i Jesosy izany: “Satria nofo aman-drà ankehitriny ny zaza, dia nandray izany koa Izy, mba hahazoany fahefana amin’izay manana fahefana amin’ny fahafatesana amin’ny alalan’ny fahafatesany. , dia ny devoly, ka nanavotra izay tsy maintsy ho mpanompo mandritra ny androm-piainany noho ny tahotra ny fahafatesana » (Hebreo 2,14- iray).
Tsy mahagaga raha nanandrana nandrava ny fikasan’Andriamanitra tao amin’i Jesosy Kristy Zanany i Satana. Ny tanjon’i Satana dia ny hamono an’i Jesosy, ilay Teny tonga nofo, fony Izy mbola zazakely (Apokalypsy 1 Kor.2,3; Matthew 2,1-18) mba hitsapana azy nandritra ny androm-piainany (Lio 4,1-13), ary ataovy an-tranomaizina sy vonoiny (and. 13; Lio. 22,3- iray).
“Nahomby” i Satana tamin'ny famelezana farany tamin'ny fiainan'i Jesosy, saingy ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty avy eo dia niseho sy nanameloka ny devoly. Jesosy dia nanao "fampisehoana ho an'ny daholobe" tamin'ny làlan'izao tontolo izao sy ny ratsy nasehon'ny devoly sy ny mpanara-dia azy. Nanjary nazava tamin'ny rehetra izay vonona ny maheno fa ny fitiavan'Andriamanitra ihany no mahitsy.
Tamin’ny alalan’ny tenan’i Jesosy sy ny asa fanavotana nataony no nivadika ny fikasan’ny devoly ka resy izy. Noho izany, tamin’ny alalan’ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin’ny maty, dia efa nandresy an’i Satana i Kristy tamin’ny fampiharihariana ny henatry ny ratsy. Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany, tamin’ny alin’ny namadihana azy: “Mba hankanesako any amin’ny Ray ...6,11).
Aorian’ny fiverenan’i Kristy dia hitsahatra ny fitaoman’ny devoly eo amin’izao tontolo izao ary ho hita miharihary ny fahareseny tanteraka. Izany fandresena izany dia ho tonga amin’ny fiovana farany sy maharitra amin’ny faran’ity taona ity3,37- iray).
Ilay andriana mahery
Nandritra ny fanompoany teto an-tany, i Jesosy dia nanambara fa “ny andrianan’izao tontolo izao dia horoahina” (Jaona 1.2,31), ary nilaza fa “tsy manan-kery” aminy io andriana io (Jaona 14,30). Resin’i Jesosy i Satana satria tsy nahafehy azy ny devoly. Tsy nisy fakam-panahy nazeran’i Satana tamin’i Jesosy ka nahasarika azy hiala amin’ny fitiavany sy ny finoany an’Andriamanitra (Matio. 4,1-11). Nandresy ny devoly izy ary nangalatra ny fananan’ilay “lehilahy mahery”, dia izao tontolo izao nohazoniny (Matio 1.2,24-29). Amin’ny maha-Kristianina antsika dia afaka miala sasatra amin’ny finoana ny fandresen’i Jesosy ny fahavalon’Andriamanitra rehetra (sy ny fahavalontsika), anisan’izany ny devoly.
Kanefa ny fiangonana dia misy ao anatin'ny fihenjanana hoe "efa eo fa tsy ampy" izay ahafahan'Andriamanitra mamela an'i Satana hamitaka an'izao tontolo izao sy hampiely fandringanana sy fahafatesana. Miaina eo anelanelan’ny “vita” ny fahafatesan’i Jesosy ny Kristianina (Jaona 19,30) ary “Tonga” ny fandringanana farany ny ratsy sy ny fiavian’ny fanjakan’Andriamanitra eto an-tany (Apokalypsy 2.1,6). Mbola avela hialona ny herin’ny filazantsara i Satana. Mbola ilay andrianan’ny haizina tsy hita maso ihany ny devoly, ary rehefa nahazo alalana avy amin’Andriamanitra izy, dia manana fahefana hanatanteraka ny fikasan’Andriamanitra.
Ny Testamenta Vaovao dia milaza amintsika fa i Satana no hery mifehy an’izao tontolo izao ratsy ankehitriny ary ny olona dia manaraka azy tsy amin’ny saina amin’ny fanoherany an’Andriamanitra. (Amin’ny teny grika ny teny hoe “andriana” na “andriana” [toy ny ao amin’ny Jaona 12,31 nampiasa] fandikana ny teny grika hoe archon, izay manondro ny manam-pahefana ambony indrindra ao amin’ny distrika na tanàna ara-politika).
Nambaran’ny apostoly Paoly fa i Satana no “Andriamanitr’izao tontolo izao” izay “manajamba ny sain’ny tsy mino.” (2. Korintiana 4,4). Takatr’i Paoly fa Satana dia afaka manakana ny asan’ny fiangonana mihitsy aza (2. Thessalonians 2,17- iray).
Ankehitriny, ny ankamaroan'ny tontolo tandrefana dia tsy miraharaha firy ny zava-misy iray izay misy fiantraikany amin'ny fiainany sy ny ho avy - ny toe-tsaina fa ny devoly dia fanahy tena manandrana manimba azy ireo isaky ny mandeha ary maniry ny hanimba ny fikasan'Andriamanitra feno fitiavana. Ny Kristiana dia fampitandremana mba tsy hahafantatra ny teti-dratsin'i satana mba ahafahany manohitra azy ireo amin'ny alàlan'ny fitarihana sy ny herin'ny Fanahy Masina manorina. Mampalahelo fa ao anatin'ny "haza" ho an'i Satana, ny kristiana sasany dia tafahoatra amin'ny fomba diso ary tsy manome an-tsitrapo azy ireo ny sakafo hafa izay maneso ny fiheverana fa ny devoly dia tena misy sy ratsy.
Nampitandremana ny fiangonana mba tsy hitandrina amin’ny fitaovan’i Satana. Ireo mpitarika kristiana, hoy i Paoly, dia tsy maintsy miaina fiainana mendrika ny fiantsoan’Andriamanitra, mba “tsy ho voafandriky ny devoly” (1. Timoty 3,7). Ny Kristianina dia tsy maintsy mitandrina amin’ny teti-dratsin’i Satana ary tsy maintsy mitafy ny fiadian’Andriamanitra “hamelezana ny fanahy ratsy etỳ ambanin’ny lanitra” (Efesiana). 6,10-12). Tokony hanao an’izany izy ireo mba “tsy ho azon’i Satana” (2. Korintiana 2,11).
Ny asan'ny devoly
Ny devoly dia mamorona fahajambana ara-panahy manoloana ny fahamarinan’Andriamanitra ao amin’i Kristy amin’ny fomba samihafa. Ny fampianaran-diso sy ny hevitra samihafa “ampianarin’ny demonia” dia mitarika ny olona “hanaraka fanahy mamitaka” na dia tsy fantany aza ny tena loharanon’ny famitahana (1. Timoty 4,1-5). Rehefa jamba ny olona, ​​dia tsy afaka mahazo ny fahazavan’ny filazantsara, izay vaovao mahafaly izay nanavotan’i Kristy antsika tamin’ny ota sy ny fahafatesana (1. Johannes 4,1- enina ambin'ny folo; 2. Jaona 7). Satana no tena fahavalon’ny filazantsara, “ilay ratsy” izay mitady hamitaka ny olona handa ny vaovao tsara ( Matio 1 Kor.3,18- iray).
Tsy voatery hamitaka anao amin’ny fomba manokana i Satana. Afaka miasa amin’ny alalan’ireo olona mampiely hevitra filozofika sy teolojia diso izy. Mety ho lasa andevozin’ny firafitry ny faharatsiana sy ny famitahana izay miraikitra ao anatin’ny fiaraha-monina misy antsika olombelona koa ny olona. Azon’ny devoly atao koa ny mampiasa ny toetrantsika olombelona lavo hanohitra antsika mba hinoan’ny olona fa manana ny “fahamarinana” izy ireo raha ny marina dia efa nahafoy izay an’Andriamanitra hanohitra izay an’izao tontolo izao sy ny an’ny devoly. Ny olona toy izany dia mino fa ny fomba finoany diso lalana dia hamonjy azy (2. Thessalonians 2,9-10), fa ny tena nataon’izy ireo dia “nanova ny fahamarinan’Andriamanitra ho lainga” (Romana 1,25). Ny “lainga” dia toa tsara sy marina satria i Satana dia mampiseho ny tenany sy ny rafi-pinoany amin’ny fomba izay hisehoan’ny fampianarany ho fahamarinana avy amin’ny “anjelin’ny mazava” (2. Korintiana 11,14) miasa.
Amin’ny ankapobeny, Satana dia mijoro ao ambadiky ny fakam-panahy sy ny fanirian’ny toetrantsika lavo hanota, ka dia lasa “mpanangom-panahy” izy (2. Thessalonians 3,5; 1. Korintiana 6,5; Asan'ny Apostoly 5,3) antsoina. Nitarika ny fiangonana niverina tany Korinto i Paoly 1. Mosesy 3 sy ny tantaran’ny Saha Edena mba hanentanana azy ireo tsy hiala amin’i Kristy, zavatra izay ezahin’ny devoly atao. “Fa matahotra aho, fa tahaka ny namitahan’ny menarana an’i Eva tamin’ny hafetseny no hialan’ny hevitrareo hiala amin’ny fahatsorana sy ny fahadiovana ho amin’i Kristy”2. Korintiana 11,3).
Tsy midika akory izany hoe nino i Paoly fa naka fanahy sy namitaka mivantana ny tsirairay i Satana. Ny olona izay mino fa "ny devoly no nampanao ahy" isaky ny manota dia tsy mahatsapa fa i Satana dia mampiasa ny rafi-paharatsiana eto amin'izao tontolo izao sy ny toetrantsika lavo hanohitra antsika. Raha ny amin’ireo Kristianina tany Tesalonika voalaza etsy ambony, dia nety ho nanao izany fitaka izany ny mpampianatra izay namafy fankahalana an’i Paoly tamin’ny fitaka ny olona mba hino fa mamitaka azy [Paoly] izy, na nanafina ny fitiavam-bola na ny antony maloto hafa. (2. Thessalonians 2,3-12). Na izany aza, satria ny devoly dia mamafy korontana sy manodinkodina an'izao tontolo izao, amin'ny farany dia ao ambadiky ny olona rehetra izay mamafy korontana sy fankahalana ny mpaka fanahy.
Araka ny voalazan’i Paoly, ny kristiana tafasaraka amin’ny fiombonan’ny Fiangonana noho ny fahotana dia “natolotra an’i Satana” raha ny marina (1. Korintiana 5,5; 1. Timoty 1,20), na “nivily nanaraka an’i Satana” (1. Timoty 5,15). Nampirisika ny andian’ondriny toy izao i Petera: “Mahonòna tena, ka miambena; fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany »(1. Petrus 5,8). Ny fomba handresena an’i Satana, hoy i Petera, dia ny “manohitra azy” (and. 9).
Ahoana no hanoheran’ny olona an’i Satana? Hoy i Jakoba: “Maneke an’Andriamanitra àry. Tohero ny devoly dia handositra anareo izy. Manatòna an'Andriamanitra, dia hanatona anareo Izy. Diovy ny tananareo, ry mpanota, ary hamasino ny fonareo, ry mpanota” (Jakoba 4,7-8e). Manakaiky an’Andriamanitra isika rehefa manana toe-tsaina feno fanajana feno fifaliana sy fiadanana ary fankasitrahana Azy ny fontsika, velomin’ny fanahiny feno fitiavana sy finoana.
Ny olona tsy mahalala an’i Kristy ary tsy tarihin’ny Fanahiny (Rom 8,5-17) “miaina araka ny nofo” (and. 5). Mifanaraka amin’izao tontolo izao izy ireo ary manaraka “ny Fanahy izay miasa ao amin’ny zanaky ny tsi-fanarahana amin’izao andro izao” (Efesiana). 2,2). Io fanahy io, izay fantatra any amin’ny toerana hafa hoe devoly na Satana, dia manodikodina ny olona mba hiheverany ny “fanirian’ny nofo sy ny saina” (and. 3). Fa amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra dia afaka mahita ny fahazavan’ny fahamarinana izay ao amin’i Kristy isika ary manaraka izany amin’ny alalan’ny Fanahin’Andriamanitra, fa tsy ho lavo amin’ny tsy fahalalana ny herin’ny devoly, ny tontolo lavo, ary ny toetrantsika olombelona malemy ara-panahy sy mpanota.
Ny adin'i Satana sy ny fahareseny farany indrindra
“Ao anatin’ny fahoriana izao tontolo izao” [eo ambany fifehezan’ny devoly] hoy i Johannes (1. Johannes 5,19). Fa ireo izay zanak’Andriamanitra sy mpanara-dia an’i Kristy kosa dia nomena fahalalana mba “hahafantatra ny marina” (and. 20).
Amin'io lafiny io, ny Apokalypsy 1 dia2,7-9 tena mampihomehy. Ao amin’ny foto-kevitry ny ady ao amin’ny Apokalypsy, ilay boky dia mampiseho ady an-danitra teo amin’i Mikaela sy ny anjeliny sy ilay dragona (Satana) sy ny anjeliny lavo. Resy ny devoly sy ny mpanompony ary “tsy hita intsony ny fitoerany any an-danitra” (and. 8). Ny vokany? “Ary nazera ilay dragona lehibe, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, ka nazera tamin’ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy” (and. 9). ). Ny hevitra dia hoe manohy ny ady amin’Andriamanitra i Satana amin’ny fanenjehana ny vahoakan’Andriamanitra eto an-tany.
Ny ady eo amin'ny ratsy (namboarin'i Satana) sy ny tsara (notarihin'Andriamanitra) dia niteraka ady tany amin'i Babylona Lehibe (izao tontolo izao fehezin'ny devoly) sy i Jerosalema vaovao (ny vahoakan'Andriamanitra izay arahin'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry Jesosy Kristy ). Ady voatendry ho mpandresy io satria tsy misy mahasakana ny tanjony.
Amin'ny farany, ny fahavalon'Andriamanitra rehetra, anisan'izany i Satana, dia ho resy. Ny fanjakan'Andriamanitra - filaminan'ny tontolo vaovao - dia tonga ety an-tany izay tandindon'i Jerosalema vaovao ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny devoly dia hesorina tsy ho eo anatrehan'Andriamanitra ary ho fongotra miaraka aminy ny fanjakany (Apokalipsy 20,10) ary hosoloin'ny fanjakan'Andriamanitra fitiavana mandrakizay.
Izao no vakintsika momba ny “faran’ny” zava-drehetra: “Ary nahare feo mahery avy teo amin’ny seza fiandrianana aho nanao hoe: Indro, ny tranolain’Andriamanitra mbamin’ny olona! Ary hitoetra eo aminy Izy, ka ireo ho olony, ary Izy, dia Andriamanitra momba azy, ho Andriamaniny; ary hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony; dia tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; satria efa lasa ny voalohany. Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra; Ary hoy Izy: Soraty, fa marina sy azo antoka ireo teny ireo. (Apokalypsy 21,3- iray).